Shir ay soo qaban qaabiyeen QM iyo Turkiga oo Soomaaliya ku saabsan oo maanta ka furmaya Istanbul, Turkey. – Radio Daljir
Istanbul, May 21 – Wajiga hore ee kulan uu heerkiisu sarreeyo oo lagaga hadlayo rajo soo celinta Soomaaliya, ismari waaga siyaasadeed, iyo kala dambayn la?aanta dalka ku cimri dheeraatay, ayaa maanta ka furmaya magaalada Istanbul ee Turkiga.
Ka qayb galayaasha shirkan ayaa maanta oo Jimce ah isku arki doona kulan hor dhac ah oo loogu sii gogol xaadhayo kulan wayne maalinta sabtida ee barri ah arrimaha shirkan uu ku saabsanyahay, waxa lagu wadaa in ay ku biiraan shirkan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Sh Shariif Sh Axmed iyo xoghayaha guud ee Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa Ban Ki Moon.
Wafti ka socda Puntland oo uu hogaaminayo M/weyne C/raxmaan M. Faroole ayaa sidoo kale shirka ka qayb galaya.
Budhcad badeedda aafada ku ah marinnada badda ee ka dillaacday Soomaaliya kana hawl galaysay sanadihii ugu dambeeyey ayaa uu shirkan si mug leh uga hadli doonaa, waxa la fili karaa in tallaabooyin ka dhan ah budhcad badeedda si loo qaado dowladda Soomaaliya iyo maamullada dalka ka jira laga taageeri doono dhinaca farsamada iyo maaliyadda si ay qayb wayn uga noqdaan dagaalkaas ka dhanka ah budhcadda badaha ee Soomaalida ah.
Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa iyo Turkiga oo kulankan wadajir u soo qaban qaabiyay waxa kale oo ay danaynayaan in lagaga hadlo madashaasi ballaadhinta xidhiidhka waddamada Afrika u dhexeeya.